Shiinaha Customized Skin Skin, Biyaha Qaboojiyaha Plate, godka Isgaarsiinta, Qaybo ka CNC Processing iyo Factory - Dongguan Guancheng qiraysa Hardware Co., Ltd.
Dongguan Guancheng Qiimeynta Qalabka Qalabka Co., Ltd. waxay diiradda saareysaa bixinta tayo sare leh oo habeysan Heat, Biyaha Qaboojinta Biyaha, Qalabka Isgaarsiinta, Qaybaha Qalabka CNC. Shirkaddu waxay u hoggaansan tahay iimaanka wanaagsan ee mabda'a ah waxayna si daacadnimo leh u rajeyneysaa inay kula shaqeyso.
Waa la qorsheyn karaa si loo soo saaro qaybo ka mid ah qaabab adag oo ay adag tahay in lagu farsameeyo lathe caadi ah. Ku habboon saxnaanta sare, dufcad ballaaran, qaybo qaab adag. Laakiin sidoo kale waxay si fiican ugu shaqeysaa qaybo yaryar. Dayactirka ayaa ka qaalisan kan lathe caadi ah.
In geeddi-socodka howsha si otomaatig ah loo cabbiri karo, isla markaana si otomaatig ah u magdhabi karo qalabka duugga ah iyo sababaha kale ee qaladka. Markaa tayada wax-soo-saarku way wanaagsan tahay, saxsanaantu way deggan tahay.
Ka shaqaynta godka
Sifooyinka ayaa si weyn u yareeya tirada qalabaynta, ka baaraandegidda qaababka isku-dhafan ee qaybaha uma baahna qalab isku-dhafan oo isku dhafan.
Qalabaynta qalabka isgaarsiinta
Waxay ka baaraandegi kartaa dusha sare ee adag oo ay adag tahay in lagu farsameeyo habab caadi ah, iyo xitaa qaybo ka mid ah oo aan la arki karin.
Waxay ka baaraandegi kartaa dusha sare ee ay adag tahay in laga shaqeeyo habab caadi ah, iyo xitaa qaybo ka mid ah oo aan la arki karin.